Yintoni i swap kwi forex? | Ezezimali
Abantu abaninzi, kwanabo sele betyalomali kwimarike yemali, abangazi ukuba yintoni etshintsha kwi-forex. Ikwabizwa ngokuba ngamanqaku okutshintsha, ukutshintsha iikhomishini okanye ukuhambisa kwi-forex. Nangona kuyinyani ukuba ayichaphazeli ukusebenza kwe-scalping okanye i-intraday, kuyimali ekufuneka irekhodwe xa isikhundla sihlala sivulekile ukusuka kusuku olunye ukuya kolandelayo. Intlawulo enokubakho zombini (bayakuhlawula) nxamnye nawe (uyayihlawula).
Ukwenza ingxelo ngazo zonke iindleko kunye nengeniso kubalulekile kuqoqosho olusempilweni. Ke masibone yintoni utshintsho, indlela ekuchaphazela ngayo, ungazuza njani okanye uzenzakalise, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kukuba utshintsho lubalwa njani kwi-forex.
1 Yintoni utshintsho?
1.1 Utshintsho luvela phi kwi-forex?
1.2 Ukutshintsha / ukuqengqeleka kwi-broker
2 Ungaxhamla njani kutshintsho
3 Ukutshintsha kubalwa njani kwi-forex?
4 Izigqibo zokugqibela
Abanye abantu bakubiza ngokuba kukuqengqeleka kwemali. Ukutshintsha ngumahluko phakathi kwexabiso lenzala yamazwe amabini. Kuya kuba kuchanekile ukutsho ngoko, ukuba ngumahluko phakathi kwenzala yamazwe. Nangona kunjalo, kuba "izibini zemali" zichukunyisiwe kwi-forex, kungcono ukuthi umahluko uphakathi kwamazwe amabini. La mazwe mabini abandakanyeka kwisibini esithile semali.
Inzala yonyaka, Kufuneka ihlawulwe ngokusebenza ngalunye esikugcina kuvulekile ukusuka kusuku olunye ukuya kolandelayo kwaye yonke imihla. Kwaye ikhona ngenxa yokuba amaqondo wenzala okuxhasa ilizwe awanakufana phakathi kwabo. Sineendawo ezinamazinga asezantsi kakhulu nangalunganga, anjengendawo ye-Euro (imali ye-EUR), iSwitzerland (imali ye-CHF) okanye iJapan (imali ye-JPY), kunye nezinye eziphezulu, ezinjengeRashiya (imali yeRUB). Kukho iimeko ezizimeleyo zamazwe anenzala enkulu, njengeArgentina. Vula IdathaMacro, iwebhusayithi endiyincomayo kwaye endihlala ndiyisebenzisa ukujonga idatha evela kwamanye amazwe, uya kuba nakho ukufumana amaxabiso wenzala akhoyo ngawo onke amaxesha.
Utshintsho luvela phi kwi-forex?
Ukusuka Umahluko kumyinge wenzala weBhanki ePhakamileyo apho imali nganye ihambelana khona. Ukuyiqonda, makhe sithathe i-Dola yase-Australia (i-AUD) kunye ne-Swiss Franc (CHF) njengomzekelo. Phakathi kwabanye, kuba isibini se-AUD / CHF sesona ndisebenza kakhulu kuso. Phantse iminyaka emi-2 bendihlala ndivula imisebenzi yokuthenga. Lo mzekelo ulungile:
Khumbula ukuba Imali yokuqala yomnqamlezo wemali sisiseko semali, kule meko i-AUD. Okwesibini yimali eqikelelweyo, kule meko CHF.
I-AUD ixhomekeke kwinqanaba lenzala le-1%, kwaye i-CHF inereyithi ye -50%. Umahluko wayo opheleleyo ngu 1’50-(-1’25)=2’75%. Oku kuya kuba ngumdla kuthi, ukuba wethu isikhundla siyathengwa. Ukuba kwelinye icala siyathengisa, kuya kufuneka sihlawule le nzala.
Ngakolunye uhlangothi, sithathe umnqamlezo ngenye indlela (CHF / AUD) siya kuba nomehluko (-1'25) -1'50 = -2'75%. Ke ngoko, kwindawo ende sinokuhlawula olo tshintsho, kwaye kwimeko yentengiso singayifumana.
Khumbula ukuba xa uthenga ingqekembe yokuqala ufumana inzala yakho, kwaye xa wahlukana neyesibini uyayihlawula. Ngokuchasene noko, ukuba uyathengisa, kwingqekembe yokuqala uhlawula inzala, uze kowesibini uyifumane.
Amanqanaba emidla ahlala ahluka ngokuhamba kwexesha. Ezinye zizinzile, ezinye azizinzanga (qaphela ngezi, asifuni zoyikiso).
Ukuza kuthi ga ngoku, ungabona umxholo emva kokutshintsha. Ukuba uthatha inzala yemali ebandakanyekayo kwisiphambano ngasinye njengereferensi, uyakubona ukuba umrhwebi wakho uhlawula njani okanye ukuhlawulisa ngokuxhomekeke kwezi ujonge kuzo.
Ukutshintsha / ukuqengqeleka kwi-broker
Oku kubalulekile. Umrhwebi akabonakalisi ipesenti, kodwa kunoko kwiipips (egameni lakho okanye ngokuchasene). Kwaye ngaphezulu, uyakubona oko ayilingani, indawo ende ayifani nendawo emfutshane. Akufanelekanga ukuba ifane? Ewe kunjalo. Kwenzeka ntoni kule meko yile umrhwebi uhlawulisa ikhomishini kumntu ngamnye nakubaboneleli bayo. Kwaye iyaqondakala, kuba lishishini lakho kwaye siyaxhamla kwiinkonzo zakho.
Kwimeko yam, umrhwebi wam undibhatala ngesikhundla eside (Ukutshintsha ixesha elide) kwi-AUD / CHF, i-0 iipips ngosuku. Ke, ukuba ndithe ndavula indawo emfutshane (Nditshintshe ngokufutshane) ndingabhatala -44 iipipi ngemini. Ukuba akukho khomishini ihlawulwayo, sinokubona ngokuthe ngqo amanani epip, anje nge-0 kunye -71'0,55 umzekelo, kuxhomekeke ekubeni ibikukuthenga okanye ukuthengisa.
Ungaxhamla njani kutshintsho
Lumka, kuba eli likrele elintlangothi-mbini. Ndiyacacisa. Ukuqala kwam ukuba nombono wokutshintsha, impembelelo yam yokuqala yayikukukhangela imali eza kundibhatala eyona pips ukugcina isikhundla esivulekileyo. «Ndiza kushiya indawo yam ivulekile ... Yonke imihla ndiza kukrola iipipi ezininzi ... Kwaye ndiya kuba yinkosi kwindalo iphela». Ungaze uyicinge!
Ungazibonela ngokwakho ukuba iikowuti zezo mali zomnqamlezo zinotshintsho oluphezulu ekuqhubekeni. Ukuba uyazikhangela, endikukhuthaza ukuba uzenze, uza kubona ezinye imizobo ekoyikisayo. Ngaba oko kuthetha ukuba kufuneka silibale malunga nokutshintsha? Hayi hayi, kude kuyo! Kodwa Likrele elintlangothi-mbini, kwaye kufuneka ndikulumkise. Umdla awahluki kuba uyayenza, kodwa lelinye ibali.
Ukutshintsha kunokukunceda, okanye kukuncede, ngaphandle kwesiqinisekiso sempumelelo epheleleyo, ekwenzeni izigqibo yorhwebo lwexesha elide.
Ukutshintsha kubalwa njani kwi-forex?
Masicinge ukuba sifuna ukurhweba ngokuthenga nge-EUR / USD, kwaye ukugcina amanani elula, masicinge ukuba sithenga into encinci, elingana ne-10.000 yeedola.
Umbhobho ngamnye, okanye into efanayo, nganye kwi-0'0001 ye-EUR / USD quote, ilingana ne- $ 1.
Amanqanaba wenzala e-USA aphezulu kunommandla we-Euro.
E-United States, umzekelo, ziyi-2% nakwi-Euro Zone 25% (Njengomzekelo, anditsho ukuba ngoku ezi).
Xa uthenga i-EUR siya kufumana i-0%, kwaye njengoko sahlukana ne-USD siya kuhlawula i-2%. Oko kuthetha ukuba siza kuhlawula i-25% ngonyaka nge- $ 2. Ilingana ne-25 yeedola.
I-225 yeedola ngonyaka, leyo yi- $ 0 ngosuku, ethi iipipsi iguqulele kwi -62 iipips. Negative kuba kule meko, yiyo into ekufuneka sihlawule. Kwaye ukongeza ukuba umthengisi uza kongeza iikhomishini, ixabiso eliphezulu lingaphuma, nge-0 okanye i-62 pips.
Ukuze iipip / amanqaku okutshintsha athambele kuthi, kuya kufuneka senze intengiso endaweni yokuthenga, kule meko.
Kwimeko apho usebenzisa enye isibini semali, iipip ziya kuhlala zihlawulwa ngemali ecatshuliweyo. Ke kuya kufuneka wenze uguquko kwimali yakho, ukuze wazi elona xabiso uza kulifumana.
Sibonile ukuba utshintsho kwi-forex, abanayo imfihlakalo, ngaphaya kokubala okufanelekileyo ukuze bazi ukuba kusichaphazela njani. Intoni Inokusinceda kwaye isenzakalise, kuxhomekeke kwizigqibo zethu. Kwaye yinto ekufuneka igcinwe engqondweni, ngakumbi kwimisebenzi yexesha elide ye-forex. Kukwabalwa okufanelekileyo kwizinyithi ezinjengegolide kunye nesilivere.
Kukho nabarhwebi abasebenzisa amanqaku atshintshayo njengesiqhushumbisi sezinto ezithile, ezisebenza kwiiCFDs. Ngethuba nje sihamba ixesha elide, Kuya kufuneka siqwalasele ezo ndleko zemihla ngemihla esiza kuzenza ukugcina urhwebo oluvulekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Yintoni i swap kwi forex?